တရုတ်နိုင်ငံ၏ တက်ကြွသော COVID ကင်းစင်ရေးမူဝါဒ သည် လူ့အသက်များကယ်တင်ပြီး စီးပွားရေးနာလန်ထူစေကြောင်း ပါကစ္စတန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံမြို့တော် ပေကျင်း၊ စွန့်ရိခရိုင်ရှိ COVID-19 ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုတွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးမှ nucleic acid စစ်ဆေးမှုအတွက် နမူနာများရွှေ့ပြောင်းနေမှုအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေ ၁၂ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အစ္စလာမ်မာဘတ် ၊ မေ ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Bilawal Bhutto Zardari က တရုတ်နိုင်ငံ၏ တက်ကြွသော COVID ကင်းစင်ရေးချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းသည် ဗိုင်းရပ်စ် ဖယ်ရှားသုတ်သင်ခြင်း၊ မရေမတွက်နိုင်သော အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေးကို အလျင်အမြန်နာလန်ထူစေခြင်း၌ အထူးသဖြင့် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြောင်း မေ ၁၂ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်၊ ဘလိဇ်၊ ဂျာမနီ၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဆီနီဂေါ စသည့်နိုင်ငံများမှ ပူးတွဲအိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပသည့် ဒုတိယအကြိမ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် Zardari က အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတိုင်းနှင့် ဒေသတိုင်းသည် ကိုယ်ပိုင်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးမဟာဗျူဟာကို ဖန်တီးရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသော ချဉ်းကပ်မှုပုံစံမှာ ကပ်ရောဂါအား တိုက်ဖျက်ရန် အသုံးမပြုနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ တက်ကြွသော COVID ကင်းစင်ရေးချဉ်းကပ်မှုမှာ တရုတ်၏ လက်တွေ့အခြေအနေ၌ အမြစ်တွယ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအပြင် လိုအပ်နေသောနိုင်ငံများအား COVID-ဆက်စပ်အကူအညီများ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းZardari က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံများအကြောင်း ဆွေးနွေးရာတွင် ကပ်ရောဂါကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် မည်သည့်ချဉ်းကပ်မှုမဆို သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထားများနှင့် ယုတ္တိဗေဒအရ ခိုင်မာမှုအား အခြေခံထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် တုံ့ပြန်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို သတ်မှတ်ထားသော ကူးစက်ရောဂါဗေဒနှင့် တိုင်းရင်းဆေးပညာဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများဖြင့် လမ်းညွှန်သင့်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အောင်မြင်သော အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ အဓိကကျ၍ အရေးကြီးကြောင်း ပါကစ္စတန် ထိပ်တန်း သံတမန်က ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှင်သန်နိုင်ရေးက ကျွန်တော်တို့ အတူတကွ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိမှုအပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသာထင်ရှားပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ (Xinhua)
China’s dynamic zero-COVID policy saves lives, recovers economy: Pakistani FM
ISLAMABAD, May 13 (Xinhua) — Pakistani Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari said on Thursday that China’s dynamic zero-COVID approach is particularly successful in eliminating the virus, saving countless lives and swiftly recovering its economy.
Every country and region will have to devise its own anti-virus strategy, and one-size-fits-all approach cannot be used to battle such pandemics, he said, adding that China’s dynamic zero-COVID approach is rooted in China’s realities.
“It has been evidently clear in the last two years that our survival hinges on our ability to work together,” he said. Enditem
Photo-A staff member transfers samples for nucleic acid test at COVID-19 testing lab in Shunyi District of Beijing, capital of China, May 12, 2022. (Xinhua/Ren Chao)